RN4 – Taksiborosy nivadibadika: olona enina indray maty, zaza herintaona ny iray | NewsMada
Zaza vao herintaona ny iray ary 10 taona ny iray hafa. Ireo no nanampy ireo mpandeha efatra namoy ny ainy tamin’ilay loza mahatsiravina teny Andranofotsy RN4, omaly maraina. Taksiborosy avy any Mahajanga ity niharan-doza ity. Ankoatr’ireo maty, marobe ireo naratra mafy.
Nitrangana lozam-pifamoivoizana mahatsiravina indray ny lalam-pirenena fahefatra, omaly maraina tokony ho tamin’ny 5 ora. Tra-doza tamin’izany ny taksiborosy mampitohy an’i Mahajanga sy ny Renivohitra teo amin’ny fokontany Andranofotsy Fandrosoana, kaominina ambanivohitr’i Fihaonana, distrikan’Ankazobe. « Nifanena tamina kamiao iray ilay taksiborosy ka nandona mafy an’ilay bisikileta teo alohany », hoy ny fanazavan’ny zandary ao Fihaonana misahana ny famotorana. Nambarany fa vokatry ny fandehanana mafy no nahatonga ny loza. Vokany, nivoaka ny arabe sy nivadibadika tany ankavian-dalana ilay fiara. Maty teo no ho eo tamin’izany ny olona miisa telo. Isan’izany ilay lehilahy nitondra bisikileta, ny zaza iray sy ny rangahy lehibe mpandeha tao amin’ilay taksiborosy. Marobe ireo naratra mafy sy voatery nalefa vonjimaika teny amin’ny toeram-pitsaboana ao Fihaonana, Andranovelona sy ao Bejofo Mahitsy. Tsy tana anefa ny ain’ny telo tamin’ireo naratra mafy izay nahitana zaza iray.
Isan’ireo naratra ihany koa ny mpamily ny fiara, saingy tsy ahina ny ainy. Ny sasany amin’ireo mpandeha, mbola manohy ny fitsaboany eny amin’ny HJRA. Ny vata-mangatsiakan’ireo mpandeha sasany kosa, efa eny anivon’ny fianakaviany tsirairay avy raha mbola miandry ny azy kosa ny roa hafa. Hatramin’ny ora nanoratanay farany, efa tsy eo an-toerana intsony ilay taksiborosy miasa ao amin’ny kaoperativa Kofila. Efa natao andrimaso ihany koa ny mpamily, misokatra manaraka izany ny famotorana ny raharaha.
Isan’ireo lalam-pirenena isehoana lozam-pifamoivoizana matetika ny lalam-pirenena fahefatra. Tsy vitsy ireo efa namoy ny ainy, marobe ihany koa ireo naratra mafy vokatry ny fandehanana mafy.
Efa tafiditra anatin’ny fotoam-pialan-tsasatra ihany koa isika izao, marobe ireo fiara fitaterana avy eto an-drenivohitra mihazo an’i Mahajanga. Tokony ho mailo, araka izany, ny tsirairay. Ilaina ihany koa ny famerana ny hafainganam-pandehan’ireo fiara hisorohana ny loza.